Ramadaanka oo foodda nagu soo hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ramadaanka iyo dhallaanka iskuullada dhigta ee sooma. sawir: Ariel Schalit
Ramadaanka oo foodda nagu soo hayo
La daabacay tisdag 15 maj 2018 kl 16.36
Dhalashada bisha ramadaanka oo fooda inagu soo heysa iyadoo uu sanadkan 2018 ku soo beegmay xilliga xagaaga.
Dugisga hoose dhexe ee Annerstaskolan oo ku yaal Huddinge oo dhacda duleedka magaalada Stockholm ayay dhigtaan arday tiradoodu gaarsiisan tahay 530 arday. Maamulaha dugsiga Renas Khezri ayaa tirada ardayda dugsigan ee soomi doonto ku qiyaastay 20 boqolkiiba.
Nur oo ah 13 jir oo dhigata iskuulka ayaa ka hadleysa sababta ay u soomi doonto.
– Sababtoo ah waxa sidaa qabta diinteyda iyo anigoo gaarey da’dii, ayey tiri Nur.
Maamulaha dugsiga Annerstaskolan Renas Khezri ayaan shakhsi ahaan u arag iney tahay in ardaydu soomaan balse caddeysay iney muhim tahay in iskuulka iyo waalidka wada shaqeeyaan maadaama soonku saameyn ku yeelanayo waxyaabaha ay ka mid yihiin waxbarashada, imaatinka iskuulka iyo waliba caafimaadka.
Maamulaha dugsiga Annerstaskolan Renas Khezri.
– Waxeynu xoogga saari doonaa wada shaqeynta maadaama aynaan soonka cidna ka joojin doonin iyadoo dalkan Sweden ay ka jirto xuriyadda diinta.
Yena waa 14 jir ka mida ardayda iskuulka waxay sidan uga hadashay sababta ay ugu tala jirto iney soonto.
– Waa inaan dareemaa waxa ay dareemaan dadka faqriga ah ee aan heysan cunto ay cunaan.
Malin ayaa iyaduna sheegtay iney soomi doonin.
– Ma doonayo inaan soomo sababto ah waxan sameeyaa tababar adag todobada maalin ee todobaadka. Waa inaan cabaa biyo waxna cunaa haddii kale waxa badanayo xanaaqeyga.
Maamulaha dugsiga Annerstaskolan Renas Khezri ayaa sheegtay in daalku saameyn ku yeelan doono ardayda soonta iyadoo iskuulkuna taa ku wargelin doono waalidka ardayda.
– Haddii aynu daal ka dareeno ardayga soonka dartii markaa waxan la xiriiri doonaa waalidka inagoo ardayga u diri doono guriga. Waxyaabaha kale ee iman karo waxa ka mida ardayda oo ka soo daahdo iskuulka sababtuna ay tahay iney habeenki seexdaan goor danbe.